ချိုချဉ်ငံစပ်ထုံ အရသာစုံတဲ့ Jo Jo Hot Pot – FoodiesNavi
By yin sandi On January 16, 2018 0
Hot Pot ??? ဆိုင်တွေရန်ကုန်မြို့မှာ မှိုလိုပေါက်နေပေမယ့် ??? တကယ်စားကောင်းတဲ့ Hot Pot ဆိုင်လေးကိုတော့ ? အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ သတိမထားမိလိုက်မှာစိုးလို့ Foodies Navi ကနေ Foodies တို့ကိုလက်တို့ပေးချင်ပါတယ်။ ??? အခုလတ်တလော Hot Pot မှာလူကြိုက်များပြီးတော့ မာလာရှမ်းကောမှာပါလူပြောများလာတဲ့ Jo Jo Hot Pot ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ???
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်အချာကျတဲ့နေရာ တော်တော်များများမှာ ဆိုင်ခွဲတွေဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ??? Jo Jo Hot Pot ရဲ့လိပ်စာတွေကတော့–????
-No-23(A) , Nawadays Road , Dagon Township , Yangon.
-No-508(A) , Lower Kyee Myin Dine Road , Kyee Myoin Dine Township , Yangon.
-Junction 8 Shopping Center 2nd Floor
-Secret Garden , Junction Square
-Capital Hypermart Shopping Center 3rd Floor Extension
Jo Jo Hot Pot မှာဆိုရင် Hot Pot ဟင်းရည်ကို ???? အချို ၊ မာလာ ၊ တုံယမ်း ၊ မီဆို ၊ ခရမ်းချဉ်သီးဆိုပြီး အရသာ(၅)မျိုးကို ရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ??????? လတ်ဆတ်သန့်ရှင်းတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုအသုံးပြုပြီး ကျန်းမာရေးကို အထူးအလေးထားတဲ့ Jo Jo Hot Pot ဟာအချိုမှုန့်လုံးဝအသုံးမပြုပါဘူး။ ??? Hot Pot မှာထည့်စားမယ့်အသားတွေကိုလည်း ??? ရိုးရိုးအသားလွှာတွေအပြင် အရသာရှိရှိနှပ်ထားတဲ့ ရှယ်အသားနှပ်တွေကို သုံးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ????? အသားလုံးတွေကိုလည်း ??? ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်မှုမရှိစေဖို့ ကိုယ်တိုင်သန့်သန့်ရှင်းရှင်းပြုလုပ်ထားတာကြောင့် စိတ်ချယုံကြည်စွာသုံးဆောင်နိုင်မှာပါ။ ??? Jo Jo Hot Pot ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ Buffet မှာ Hot Pot အပြင်ပုဇွန်တန်ပူရာ ၊ ပုဇွန်အာလူးလိပ်ကြော် ၊ ယူနန်ဝက်သားကြော် ၊ ကြက်တောင်ပံကြော် ၊ မန်ထိုစတဲ့နေကြာဆီစစ်စစ်နဲ့ ကြော်ချက်ထားတာတွေပါ စားသုံးနိုင်မှာဆိုတော့ လုံးဝရှယ်နော်။ ???? Hot Pot စားပြီးရင်လည်း ?????☕️ Sushi ၊ ကျောက်ကျော ၊ ဖရဲသီး ၊ တရုတ်အပူကျကျောက်ပွင့်ရည်အပြင် Premium ရေခဲမုန့်ရသာ(၅)မျိုးနဲ့ Coca-cola ၊ Sprite ၊ Orange ၊ Black Tea နဲ့ Water ကိုပါစိတ်ကြိုက်သုံးဆောင်လို့ရဦးမှာနော်။ ???
Jo Jo Hot Pot မှာမာလာကြက်သားနှပ် ၊ ဝက်သားနှပ် ၊ အမဲသားနှပ်တွေထဲက ကြိုက်ရာတစ်မျိုးရွေးချယ်ပြီး အသားလုံးမျိုးစုံနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်မျိုးစုံပါဝင်တဲ့ မာလာရှမ်းကောကိုလည်း ?? မှာယူသုံးဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ??? မာလာရှမ်းကော Set မှာတော့ Lemon Tea နဲ့ water ကို Free ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ??? အရသာကြောင့် နာမည်ကျော်ကြားသလို ??? သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်မှုကြောင့် လူကြိုက်များလာတဲ့ Jo Jo Hot Pot ဟာဆိုင်ခွဲတွေလည်းရှိတာကြောင့် အထွေအထူးစဉ်းစားမနေဘဲ အမြန်သာမြည်းစမ်းခံစားကြည့်လိုက်တော့နော်။ ???
Image Source : www.facebook.com/jojohotpot